Maninona no manambola amin'ny rafitra varotra izay manara-maso marika tokana amin'ny fe-potoana tokana ho an'ny fametrahana varotra olon-kafa rehefa afaka mampiasa vola amin'ny rafitra varotra ianao izay manara-maso ireo marika 140 isaky ny fe-potoana ho an'ny fametrahana varotra ANAO.
Ampiasao amin'ny rafitra varotra afaka manao izany rehetra izany.
Araho maso ireo marika 140 amin'ny zana-potoana 9 rehetra mitady ny fananganana varotrao manokana. Anisan'izany ny forex (lehibe, zaza tsy ampy taona & exotika), metaly, angovo, entana, crypto, tahiry, indeks ary ho avy.
Atambaro ireo singa avy amin'ny tondro isan-karazany sy ny fe-potoana samihafa mba hamoronana ny fametrahana varotra farany anao nefa tsy manova ny kaody EA isaky ny mandeha.
Aza adino mihitsy ny fotoana varotra.
Safidio ny satan'ny fotoana tianao hisokafan'ny varotrao.
Vohay indray mandeha ny varotrao dia vonoy ny tenany (raha misafidy ianao).
Manana fahaverezan'ny fijanonana ATR.
Manana fahaverezan'ny fiatoana miorina amin'ny ATR izay mampiasa ny fitsipiky ny pro (izany hoe mivarotra varotra H4 amin'ny fampiasana ny tabilao M15, sns.).
Mampiasa ny tahan'ny tombony azo avy amin'ny ATR.
Akatony ny varotrao amin'ny fampiasana fe-potoana mitovy nanokafana ny varotrao.
Akatona ny varotrao rehetra rehefa tratra ny tombom-barotra azonao.
Aza manidy aloha loatra ny varotra ataonao ary tsy afa-mihetsika amin'ny 'effets whipsaw'.
Akatony ho azy ny varotrao amin'ny zoma alina (raha safidinao).
Tsy mandany ny fanananao rehetra amin'ny fanokafana varotra vaovao (avela hivoaka ny toerana misy anao).
Tsy manokatra varotra raha avo loatra ny fanaparitahana.
Aza mividy eo ambony mihitsy na mivarotra any ambany.
Mampiasà izay habe tokony hampiasaina ho anao (raha safidinao).
Mpanolo-tsaina manam-pahaizana manokana voafidy tamin'ny taona 2020 nataon'ny mpanjifantsika.